द्वारा पोस्ट गरिएको Tranquillus | फरवरी 1, 2021 | लिखित र मौखिक संचार कौशल
जुनसुकै युग, दक्षता व्यावसायिक जगतमा सँधै खोजीको गुणस्तर भएको छ। र यो गुण पनि मार्जिनमा छैन जब यो कामको लेखनको क्षेत्र आउँछ (जसलाई उपयोगीवादी लेखन पनि भनिन्छ)। वास्तवमा, यो बनेको सेट हो: गतिविधि रिपोर्ट, पत्रहरू, नोटहरू, रिपोर्ट ...
दृष्टान्तको रूपमा, मलाई धेरै अवसरहरूमा पेशेवर प्रसंगमा मेरा सहकर्मीहरूको कामको समीक्षा गर्न भनिएको छ। मैले आफूलाई धेरैजसो मानिससँग त्यस्तो लेखेको साथ सामना गरें जुन उनीहरूको अध्ययनको स्तर र हाम्रो व्यावसायिक क्षेत्रमा मिल्दैन। उदाहरणका लागि यस वाक्यलाई विचार गर्नुहोस्:
« हाम्रो जीवनमा मोबाइल फोनको बढ्दो ठाउँलाई ध्यानमा राख्दै, टेलिफोन उद्योग आउनेवाला धेरै वर्षहरूको लागि निश्चित छ।. »
यो समान वाक्य एक सरल तरीकाले लेख्न सकिन्छ, र सबै भन्दा बढी प्रभावी। त्यसैले हामी पाएको हुन सक्छ:
« हाम्रो जीवनमा मोबाइल फोनको बढ्दो ठाउँले लामो समयको लागि टेलिफोन क्षेत्रको विकासलाई सुनिश्चित गर्दछ। »
पहिले, "दृश्यमा" अभिव्यक्तिको मेटाउने नोट गर्नुहोस्। यद्यपि यस अभिव्यक्तिको प्रयोग गलत हिज्जे होईन, यो अझै पनि वाक्य बुझ्नको लागि उपयोगी छैन। वास्तवमा यो अभिव्यक्ति यस वाक्यमा धेरै नै छ; यो वाक्य जसमा अधिक सामान्य शब्दहरू प्रयोग गर्न को लागी कुनै पनि पाठकले सन्देशको प्रस better्गलाई राम्रोसँग बुझ्न सक्दछन्।
त्यसो भए, त्यस वाक्यमा शब्दहरूको संख्यालाई ध्यानमा राख्दै, तपाईंले 07 शब्दहरूको भिन्नता देख्नुहुनेछ। वास्तवमा, शुरुवाती वाक्यको लागि २ words शब्द बिरूद्ध पुनःलेखित वाक्यको लागि २० शब्दहरू। सामान्यतया, एउटा वाक्यमा औसत २० शब्द हुनुपर्दछ। शब्दहरूको एक आदर्श संख्या जसले उत्तम सन्तुलनको लागि समान अनुच्छेदमा छोटो वाक्यहरूको प्रयोग गर्न सन्दर्भ गर्दछ। अधिक लयबद्ध लेखन गर्न प्याराग्राफमा वाक्यको लम्बाई परिवर्तन गर्न यो धेरै बढी कल्पना गर्न सकिन्छ। यद्यपि 20 27 शब्द भन्दा लामो वाक्यले पढ्न वा बुझ्न सजिलो पार्दैन, यसैले लामो सीमाको अस्तित्वको प्रमाणित हुन्छ। यो नियम चाहे जोसुकैले पनि लागू गर्दछ साधारण मानिस वा विद्वान, किनकि यसको उल्लंघनले मानव मस्तिष्कको छोटो मेमोरी क्षमतामा बाधा उत्पन्न गर्दछ।
थप रूपमा, "लामो" द्वारा "धेरै वर्षसम्म" को प्रतिस्थापन पनि नोट गर्नुहोस्। यो छनोट मुख्यतया को अध्ययन को संदर्भ गर्दछ रुडोल्फ फ्ल्यास पठनीयतामा, जहाँ उनले पढ्नमा दक्षताका लागि छोटो शब्दहरू प्रयोग गर्ने महत्त्व प्रकाश पार्दछ।
अन्तमा, तपाईं एक सक्रिय आवाजमा निष्क्रिय आवाजबाट चरणको परिवर्तन देख्न सक्नुहुनेछ। वाक्य यति धेरै बुझिन्छ। वास्तवमा यस वाक्यमा प्रस्ताव गरिएको संरचनाले अझ स्पष्ट र स्पष्ट ढंगले टेलिफोनको बढ्दो भूमिका र टेलिफोन बजारको विकासको बीचको सम्बन्ध देखाउँदछ। एक कारण र प्रभाव लिंक जसले पाठकलाई विषय बुझ्नको लागि अनुमति दिन्छ।
अन्तमा, एउटा पाठ लेख्दा केवल प्राप्तकर्तालाई अन्त्यसम्म पढ्न, प्रश्न नबुझी यसलाई बुझ्नको लागि अनुमति दिन्छ; यो जहाँ तपाइँको लेखन को प्रभावकारिता निहित छ।
सरलताका साथ लेखेर दक्षताका लागि लक्ष्य राख्नुहोस्! फेब्रुअरी th, २०२१Tranquillus
अघिल्लोदूरी, मास्क, क्याटरि new: नयाँ परिवर्तनहरू कोविड १ out प्रकोपसँग जोडिएको छ
निम्नके एक सामूहिक सम्झौता जो वेतन बेनिफिटहरूको लागि प्रदान गर्दछ retroactively बर्खास्त कर्मचारीलाई हस्ताक्षर हुनु अघि लागू हुन्छ?